Umakhalekhukhwini ucingo oluncane olungenazo izintambo njeng
ⓘ Umakhalekhukhwini ucingo oluncane olungenazo izintambo njengalolu lwasendlini. Njengoba wona umakhalekhukhwini umncane wenza kube lula ukuhamba nawo yonake zonk ..
Umakhale khukwini Umakhale Khukwini: usuyindlela yesimanje elula yokuxhumana nabangani,abazali,noma izihlobo ezikude Kunenani elandaya labantu abasebenzisa omakhale khukwini emhlabeni wonke Isikhahlamezi Fax Lena ingenye yezindlela zokuthumela incwadi noma kuphi emhlabeni ngaphandle kokusebenzisa isitempu seposi, kuningi okungathunyelwa nge sikhahlamezi amaphepha, izithombe,kuhlanganise nama fayili
I-intanethi uhlelo oluqukethwe amkhompyutha ayizigidi ahlangene ndawonye kuhleloxhumano olunzulu kuwo wonke amagumbi omhlaba olusebenzisa i- Internet protocol suite. Uma uxhumeke kuyo i-intanethi nomshini osuke uwusebenzisa okungaba yikhompyutha noma umakhalekhukhwini nawo ungena kulo lolu xhaxha lohleloxhumano. Lolu hleloxhumano lohleloxhumano luqukethe olungasese, olomphakathi, olwamabhizinisi kanye nolwahulumeni. Uhleloxhumano olusezweni noma emhlabeni oluxhumene ngobuchwepheshe obuno-gesi, obungenazo izintambo kanye nobama- fibre optics. I-inthanethi iqukethe ulwazi oluningi okubalwa a ...
Umakhalekhukhwini ucingo oluncane olungenazo izintambo njengalolu lwasendlini. Njengoba wona umakhalekhukhwini umncane wenza kube lula ukuhamba nawo yonake zonke izindawo ozihambayo. Ngomakhalekhukwhini futhi abantu bayakwazi ukuxhumana nabanye abantu noma ngabe bakuliphi izwe, kulawa angaphansi komthunzi welanga. Njengoba ubuchwephese bulokhu bushintshashintsha njalo nje, niokunjalo nomakhalekhukwini bayashintsha indlelaabasebenza ngayo. Umakhalekhwini wesimanje akusesiwo owokuthumela imilayezo kanye nokufona, usukuvumela ukuba wenze izinti ezingin ngawo okubalwa kuwo ukuxhuma kwi-intanethi, ukuthatha izithombe, ukulalela umsakazo, umbikombani, ukusebenzisa inkombandlela, ngingabala ngithini.
iqhwa - amanzi Izinsimbi: igolide - isiliva - ibhulonze - insimbi - umthofu Ubuchwepheshe: amahlelokusebenza - umakhalekhukhwini - ilaptop - ikhompyutha
Ubuchwepheshe: Amahlelokusebenza - Umakhalekhukhwini - Ilaptop - Ikhompyutha - Uhleloxhumano lwamaselula - Uhlelokusebenza lwesiqoqelalwazi - Isizindalwazi
Izindlela Zokuxhumana umakhalekhukhwini - ilaptop - I - compyutha
indaba elandisayo isibonelo, okubi umakhalekhukhwini esikoleni essay, okubi umakhalekhukhwini esikoleni, ubuhle bezinkundla zokuxhumana ngendlela ubuchwepheshe, ubuhle bokusebenzisa izinkundla zokuxhumana essay,